Iingxaki ezili-10 eziqhelekileyo kwi-iPhone 6 kunye nee-6 kunye nendlela yokuzisombulula | IPhone iindaba
UCarmen rodriguez | | IPhone iindaba, iOS 8, iPhone 6, IPhone 6 Plus
Sonke siyazazi iingxaki ezenziwa yi-iOS 8 entsha kwaye silindele uhlaziyo njengamanzi kaMeyi, kodwa kufuneka sazi ukuba oku Uhlaziyo aluyi kulungisa zonke iingxaki esinokuthi sifumane ngayo kwisiphelo sethu.
Uluhlu lwe Iingxaki ze-iPhone 6 Ibanzi (ikwasebenza nakwii-iPhone 6s), kodwa ezona zixhaphakileyo zezizo esiza kuzihlalutya kwaye siza kuveza indlela yokuzilungisa ngelixa silinde uhlaziyo, olu okanye olulandelayo, apho ilungiswe ngokuthe ngqo.
Ukuba unayo iPhone 7, ungaphoswa zeziphi ezona mpazamo zixhaphakileyo kwaye zisonjululwa njani
1 Ungazilungisa njani iingxaki zebhetri ye-iPhone 6
2 Ungazilungisa njani iingxaki zonxibelelwano lweWiFi
3 Indlela yokusombulula iingxaki ze-iPhone 6 ngeBluetooth
4 Indlela yokulungisa i-glitches ezinxulumene ne-app
5 Ukuphucula njani ukusebenza
6 Uyilungisa njani iJams kwiLandscape and Portrait View
7 Ungayisombulula njani ingxaki ngeMessage
8 Ungazithintela njani ukuqala kwakhona okungahleliwe
9 Uyiphucula njani impendulo yekhibhodi emva kwexesha
10 Ungaziphepha njani iingxaki zedatha
11 Iingxaki zesithuba: uyikhulula njani imemori
12 Iingxaki zesandi
13 Ukuba akukho nto isebenza
Ungazilungisa njani iingxaki zebhetri ye-iPhone 6
Lonke uhlaziyo lunefuthe elibi kubomi bebhetri yesiphelo kwaye i-iOS 8 ayikuthintelanga. Kuya kufuneka sibe nombono ngokubanzi wale ngxaki kwaye siqonde ukuba nokusetyenziswa kwebhetri nako kunjalo imiselwe ngumzekelo wokusetyenziswa esimnika yona, yiyo loo nto ndicinga ukuba iApple ayenzi njalo akukho phuculo kule meko kuhlaziyo lwexesha elizayo.
Zininzi izinto esinokuzicebisa, kodwa eyona nto intle yile jonga las iingcebiso esele sizenzile kwiposti yangaphambili kunye khetha eyona ilungele iimfuno zakho kunye nokusetyenziswa.
Ungazilungisa njani iingxaki zonxibelelwano lweWiFi
Kule minyaka mibini idlulileyo, iibhodi zeengxoxo zika-Apple bezizele zizikhalazo nge-WiFi, Ukusuka kwimiqondiso ethanjisiweyo kunxibelelwano olungazinzanga. Ezi zikhalazo aziphelanga nge-iOS 8. Ngelixa kungekho sisombululo siqinisekisiweyo kukho izinto ezimbalwa zokuzama ngaphambi kokuthatha amanyathelo aqatha.
Inketho yokuqala kukuseta kwakhona useto lwenethiwekhi: Useto > ngokubanzi > Misela kwakhona > Hlaziya useto lwenethiwekhi. Kuya kufuneka ufake kwakhona iphasiwedi ukufikelela kwi-WiFi.
Enye into yesibini ukucima i-WiFi yenkqubo. Yayo: Useto > Ubumfihlo > Indawo > Iinkonzo zenkqubo. Cima ifayile ye- Uqhagamshelo lwenethiwekhi yeWiFi y ukubuyela umva ifowuni. Nje ukuba ulwaphulo-mthetho lube nethuba lokuba iWiFi isebenze ngesiqhelo.
Ukuba iingxaki zakho de Vumelanisa iTunes, ndwendwela isikhokelo ukusombulula le ngxaki.
Indlela yokusombulula iingxaki ze-iPhone 6 ngeBluetooth
Ngokumangalisayo, lo ngumba onezikhalazo ezininzi, ngakumbi kwabo basebenzisa umsebenzi ukudibanisa nehendsfri yemoto. Ewe kulungile Akukho sisombululo silinganayo Izithuthi ezingenazandla kunye neempawu, ukuba singaluphucula unxibelelwano lwe-iOS 8.
Landela umendo: Useto > ngokubanzi > Misela kwakhona kwaye ke qhubeka Hlela useto. Zonke iisetingi ezigciniweyo ziya kulahleka, kodwa zibonakala ngathi zilungisa imiba yabasebenzisi abaninzi.
Olunye ulwazi: Ulufumana njani kwakhona unxibelelwano lweBluetooth kunye nemoto emva kokuhlaziya kwi-iOS 8.0.2
Indlela yokulungisa i-glitches ezinxulumene ne-app
Izikhalazo kunye neenkxalabo ziye zavakala malunga nokusetyenziswa kwenkqubo entsha yokusebenza qhwa okanye vala nje. Ngokwam, i-imeyile yemveli ye-imeyile ivala ngalo lonke ixesha ndizama ukuphendula umyalezo. Ke andothusi xa ii-apps zomntu wesithathu zisenza.
Ii -apps zalapha ekhaya ziya kusokola uhlengahlengiso kunye nokulungiswa kwe-bug, kodwa abo baphuhlisi benkampani yesithathu baya kuba uxanduva lomphuhlisi ngamnye, I-Apple ayizukunceda okanye ingenelele kwaye, koku ndiyavumelana nenkampani.
Ke ngoko, ekuphela kwento eseleyo ukuyenza yile gcina ii -apps zihlaziyiwe. Ngamavila, khumbula ukuba unokhetho lokwenza kuhlaziyo oluzenzekelayo, ngenxa yoku kuya kufuneka ulandele indlela: Useto > Ivenkile ye iTunes kunye neVenkile ye App nakwicandelo le Ukhuphelo oluzenzekelayoEwe kuya kufuneka wenze ukhetho Uhlaziyo.
Ukuphucula njani ukusebenza
Ngelixa amava ethu nge-iOS 8 kwi-iPhone 6 ebelungile kwaye ekhawulezile, abanye bafumene a ukwehla okungahleliwe kunye nokucotha kwi-iPhone entsha. Nangona lo ayingombandela ngalo mzuzu, sinokuba nemicimbi yokusebenza kwezi veki zimbalwa zizayo.
I-iPhone ecothayo? Ukutshintsha ibhetri kunokuyilungisa
Kukho iindlela zokukhawulezisa ukusebenza kwe-iPhone 6 enokuba luncedo, ziluncedo ukunciphisa iziphumo ukusuka kwi-iOS 8, ezinye zezi;
Susa isiphumo separallax usebenzisa indlela: Useto > ngokubanzi > Ukufikeleleka > Ukunciphisa intshukumo. Jonga ukuba ifakwe «Si»Ukususa isiphumo, ukuba akunjalo, yiya ucofe iswitshi Ukunciphisa intshukumo ukuyiguqula ibe luhlaza.
Lahla elubala, yiya ku: Useto > ngokubanzi > Ukufikeleleka > Yandisa umahluko > Ukunciphisa ukungabonakali kwaye wenze lo msebenzi.
Uyilungisa njani iJams kwiLandscape and Portrait View
IPhone 6 ihlala incamathele ekubukekeni komhlaba emva kokutshintshela nkqo. Le yingxaki enkulu, ngakumbi xa usebenzisa usetyenziso lwekhamera. Akukho sisombululo, kodwa kukho ibhendi-yoncedo.
Xa uza kusebenzisa imo yokubona efanayo, utshixe indlela yokuqhagamshela ifowuni kwimenyu yeziko lolawulo.
Ungayisombulula njani ingxaki ngeMessage
Ezinye iingxaki kukungakwazi ukuthumela imiyalezo emitsha, phawula emitsha njengokufundwayo okanye imiyalezo efike emva kwexesha. Kule meko kukho ulungiso esinokuluvavanya.
Yenza kungasebenzi kwaye kusebenze imessage (gcinani engqondweni ukuba inendleko)
Qalisa kwakhona Isiphelo sendlela.
Cwangcisa kwakhona i ukuseta inethiwekhi yeselula: Useto > ngokubanzi > Misela kwakhona > Hlaziya useto lwenethiwekhi. Ifowuni iya kuqalisa kwakhona kwaye igcinwe kwiinethiwekhi ze-WiFi ziya kulahleka.
Ungazithintela njani ukuqala kwakhona okungahleliwe
Abanye abasebenzisi iifayile ze Ukuqalisa ngokungacwangciswanga (inkumbulo ivuza) kwi-iPhone 6. Le mpazamo yenzekile ngaphambili kwi-iPhone 5, 5s kunye ne-iPad Mini, Air kunye neRetina. Ngelixa ingenzeki rhoqo njengakuqala, isenzeka nakwabanye abasebenzisi.
Ngelixa lungekho unyango olusisigxina, lukhona iingcebiso ezithile:
Qalisa kwakhona I-iPhone 6.
Ukuseta ngokubanzi ngu: Useto > ngokubanzi > Misela kwakhona > Hlela useto.
Khupha ngaphandle usetyenziso lwamva
Linda i iOS 8.1.
Uyiphucula njani impendulo yekhibhodi emva kwexesha
Ngamaxesha athile lag encinci kwikhibhodi ye-iPhone 6 xa uchwetheza i-imeyile okanye umyalezo. Akukho lunyango luqinisekileyo koku, kodwa unokuseta useto lonke: Useto > ngokubanzi > Misela kwakhona > Hlela useto.
Ungaziphepha njani iingxaki zedatha
Ukudityaniswa okucothayo, ukungabikho konxibelelwano kunye nezinye iingxaki ezifanayo kunye nokunxulumene nokunxibelelana nomqhubi kuchaziwe. Ukuzama ukulungisa ezi ngxaki;
Cima idatha yedatha: Useto > Iinkcukacha Iiselfowuni, cima idatha yeselfowuni kunye nenketho ye-4G.
Sebenzisa i Imowudi yenqwelomoya, linda imizuzwana engama-30 kwaye uyiqhawule kwakhona ukuze usebenze kukhangelo lwee-network.
Iingxaki zesithuba: uyikhulula njani imemori
Ungasikhulula njani isikhala kwi-iPhone yam
Ukuba iselfowuni yakho ihleli akukho nkumbulo yasimahla ukugcina usetyenziso, iifoto okanye nantoni na oyifunayo, ungaphoswa zizo iingcebiso zokukhulula indawo kwi-iPhone yakho.
Iingxaki zesandi se-iphone
Ukuba i-iPhone yakho ithule kakhulu okanye ayivakali ngokuthe ngqo, unokuba nengxaki enxulumene nesithethi sayo. Kwimeko apho, apha sikubonisa izizathu kunye nezisombululo ezinokubakho kwezo Iingxaki zesandi se-iPhone.
Ukuba akukho nto isebenza
Ukuba akukho nanye esebenzayo kwaye awukwazi ukufumana isisombululo kwiiforamu zeApple, ndincoma iindlela ezimbini. Kuqala, bamba i-iPhone kwaye uyise kwi Ibha yeGenius Ivenkile yeApple. Kulungiselelwe abo bangakwaziyo okanye abangafuniyo ukuya, kuya kufuneka baqwalasele ukuqhuba ruseto lwasefektri.
Zeziphi kwezi Iingxaki ze-iPhone 6 ukhe wabandezeleka? Ngaba zikhona ezingekhoyo kuluhlu? Sitshele i-bugs eyakho i-iPhone 6 okanye ye-6s kunye nendlela oyisombulule ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 8 » Iingxaki ezili-10 eziqhelekileyo kwi-iPhone 6 kunye nendlela yokuzisombulula
Izimvo ezi-100, shiya ezakho
ngokubanzi musa ukusebenzisa ifowuni okanye ususe yonke into entsha kwi-ios 7
Umntu ubenengxaki nefowuni ye-6 kunye nekhamera, kweyam ithatha ifoto kwaye kusibekele. Kwenzeka kum kuphela ngekhamera yangaphambili ye-12mpx. Ndidinga uncedo. NGOKUBA KWI-URUGUAY KUKHANGELEKA UKUBA ANDINAYO INDAWO YOKUHLALA NGOKWABE NDIXELELE NGAYO INTLEKELE
Hlela yonke into, ukuba ayikusebenzeli… akukho sisombululo.
Kwinyanga e-1 uya kuyipapasha kwakhona ngesinye isihloko.
Kwenzeka into efanayo kum kwaye kukuba kufuneka ndicoce indawo ye-lens .. pfff ndiyathemba ukuba injalo! amathamsanqa!
Carmen, nceda unake ngakumbi xa ubhala upelo kunye nesicatshulwa kunye nokuhambelana kwaso. Ndicaphula ezinye zeempazamo ezibonwa ngeliso lenyama "ukwazi" kuyazi, "kufuneka sibone umbono obanzi" Uza kuwubona njani umbono obanzi? Kuyo nayiphi na imeko, ingangumbono obanzi, "Yiyo le nto ndingakholelwa ukuba iApple iyakwenza naluphi na uphuculo" ngekhe ndicinge ukuba iApple iyakwenza naluphi na uphuculo kuba ukuba ayenzi phuculo, iya kwenza uphuculo. Kwaye kwelinye icala, esi sithuba siyaphindaphindwa, sinye sifana nombhali omnye kwaye asiloncedo kuba konke oku sele kungaphezulu kokutshiwo, njengoko besitshilo ngaphambili, buyisela kwaye ukuba akunjalo akusekho.
Madoda, ukuba uqesha abahleli, nceda uqaphele ukuba babhala ntoni kwaye, ubuncinci, bayazi kwaye babhale ngolwimi lwabo lweenkobe.
Enkosi kwaye Malunga.
Esi sithuba yindibaniselwano (njengoko kubonisiwe sisihloko kunye nesikhokelo) kunye nenkcazo kunye negrama, ndiza kukuxelela kuphela ukuba ufunde ingxelo yakho kwakhona, egcwele iimpazamo zopelo kunye nokungabikho kwezivakalisi ngaphambi kokuba uqale ukugxeka abanye.
Ukuba awunanto yokwenza, zifumanele umdlalo wokuzonwabisa kodwa uyeke ukuthetha ububhanxa, ngendlela, iSpanish, nangona ilulwimi lwam lwesibini, ayilulo ulwimi lweenkobe, ke wenze ngokupheleleyo.
Kudala ndifunda eli phepha, uCarmen uhlala egxekwa, ngamanye amaxesha enezizathu ezingakumbi kwaye kwezinye ezingaphantsi, ndixolele ngokukuxelela uDamian, nangayo yonke intlonipho efanelekileyo, oku kujonge okungenakwenzeka ... Utyibilikise kakhulu ngeli xesha, yonke into ngokufuna ukulandela «indlela yokuthuka» ungazami ukuzenzisa, kuba oko kubonisa ukuba awunalo uluvo lokuthetha ...
UMarcelo pepe sitsho
UCarmen olungileyo! Aba ngabo abananto yokwenza kwaye bafunde ukubona ukuba yintoni ekufuneka bayigxeke…. Imibuliso, qhubekeka ngolu hlobo, usazisa okanye usenza, kuba asinakukwazi ukufunda yonke into kwaye ilungele uninzi lwethu.
Phendula uMarcelo Pepe
Umlomo wakho ugcwele izizathu, Damien, ukuba unika ingcebiso, hlala nayo.
Ngendlela uDamian, AKUKHO "uyazi"; "Uyazi", njengoko uCarmen wayebhale kakuhle. Eminye, ewe, ikwayiloo nto uCarmen akuxelela yona; Ngaba ikhe yathi qatha kuwe ingxelo yakho? Akukho tilde enye oyibekileyo (kwaye kukho ezininzi ezingekhoyo). Ngapha koko, musa ukunika izifundo zopelo ukuba awazi nokuba ubhala njani ngokuchanekileyo.
UDamien: isazela kunye nesazela sivela kwi-cum scio yesiLatin, ngexesha le-freíd igama elithi isazela lalisaziwa kwaye lelona kuphela liphulukana neqela le-sc.
U-Errata Freud akazange afune
Damien, apha uyangena ukubonisa iingxaki onazo nge-iPhones, hayi ukubonisa ukuzithemba kwendoda ebalaseleyo, engalunganga kwindawo engeyiyo.
hahaha, i-asshole engummangaliso ... ukuthetha izinto ezimbi kwabanye malunga neefoul nangaphezulu kwelo, ukubeka iimpazamo kuwe hahaha yintoni isidenge
Inyani yile yokuba ubonwe ngolu hlobo uchanekile, ndicinga ukuba singama-masochists nawo anokholo oluyimfama lokuba yonke into iza kulungiswa, kodwa ke, ezi ngxaki zenzeka nakwiintsapho ezilungileyo kwaye, kule meko, kubo bonke abavelisi ukuya kokukhulu. okanye kancinci.
Ndiyifumene i-iPhone kwaye anditshintshi nangona ndinazo ezinye iingxaki endizishwankathela ngentla….
Enkosi ngezimvo zakho nangokubonisa intlonipho, kukuthembeka komoya omtsha.
Sonke siyazi ukuba iinguqulelo zokuqala zenguqulo nganye ze-ios kunye ne-osx zizisa iibugs.
Ukuba bayalungisa ngokuhamba kwexesha, kwimeko ye-ios ukuba kufuneka ihlaziyiwe ngokuphuma kwi-osx hlala kwisitali sokugqibela ide ibe izinzile ngakumbi, ndiyitsho ngo-yosemite kulapho ifika khona.
Njengoko uCarmen esitsho ukuba akukho nto igqibeleleyo okanye akukho mntu ugqibeleleyo, bahlala benendlela yokuya kwelinye iqonga ukuba bacinga ukuba benze ngcono.
Iyahlekisa into yokuba yonke into oyibizayo ingenzeki kum kwi-iphone 6 kunye, ilungile kum
Ukudityaniswa kuka-6 kundenzela kakuhle, kodwa enye indawo yokujonga ihlala iluncedo kwaye kuhlala kukho into ekubalekayo kwaye ngakumbi xa ubandakanyeka kwezinye izinto ezingezizo ezomnxeba, iposti iyaxatyiswa ngokunjalo ezinye kunye neendaba, zombini umxholo kunye nemvelaphi, yonke imihla ndikutyelela izihlandlo ezininzi ukubona ukuba ubeka izithuba ezitsha kwaye nangona bendikunye noApple iminyaka emininzi uhlala undifundisa into wena namaphepha omhlobo wakho ahambelana Mac kunye ne-ipad.
Into echanekileyo yayikukubeka umxholo "iingxaki ezili-10 eziqhelekileyo kwi-iOS 8"
Phendula kwi fgwgf
Yabona ndisebenza neeselfowuni kwaye zihlala zininzi kakhulu iingxaki nge-iphone 6 kunye ne-6 kunye ne-XNUMX ngoku kunye nenkolelo yam baqalise imveliso yabo ngaphandle kokuvavanywa kakuhle kuba ineempazamo ezininzi ezisonjululwa kuphela ngokuqalisa kwakhona, kodwa bendidla ngokwenzeka kwakhona kwaye inyani asizukuyichitha siyisebenzisa kwakhona
Ndine-iphone 6 kunye ne-ios 8.1 kunye ne-jailbreak kwaye iyafana nefoto, ndonwabile kakhulu ngokuthenga kufuneka nditsho ukuba ngaphambi kokuba ndibe ne-iphone 4 ejele kwaye akukho mbala ibhetri ihlala ixesha elide, i-wifi ihamba ngokukhawuleza okukhulu kwaye andisayi kuphinda ndikuxelele malunga nemidlalo kwakhona kwaye akufuneki ndifane nomTshayina ojonge esikrinini, ingena ngokugqibeleleyo ezipokothweni zebhulukhwe ngaphandle kokuba unxibe ibhlukhwe ebhityileyo ayisiyonto yam kwaye ndiye ndahlala kuyo ngaphezu kwesihlandlo esinye xa ndingena emotweni kwaye ayigobanga milimitha, oko kukuthi ukuba ndikhuseleke kakuhle ngekhava ye-ringke fusion kunye neglasi enomsindo kwiscreen.
Daniel Moreno sitsho
Ndithenge i-iphone 6 kwaye amaxesha amaninzi xa ndisekhaya kunye ne-wifi ... Akukho ngxaki ... Kodwa ukuba ndiyemka ekhaya ... kuya kufuneka ndicime kwaye ndisebenzise idatha yeselfowuni ye-3g okanye ye-4g ukuze isebenze kakuhle.
Oku kuyandiqhekeza…. Ukunikwa ixabiso leqela
Phendula kuDaniel Moreno
UArturo Glezca sitsho
Eli lixesha lesithathu ndibuyisela i-iPhone 6 yam (Ngokwam). Ndiyithathile ukuqinisekisa enye ye-3 ndifuna utshintsho okanye ukubuyiselwa imali, kodwa bayayibuyisela kwaye bandixelele ukuba sele isebenza kwaye abafuni kuyitshintsha. Ndenza njani apho ??? I-Apple kufuneka ihlawule ngakumbi, kuba asichithi kwi-200Dlls terminal ... Ibiza ngaphezulu kwe-900Dlls, ndibuyela kwi-Galaxy S5 yam.
Phendula kuArturo Glezca
Mva kwemini umntu angandinceda
Ndibeke i-iPhone 6 yam kunye ne-resets kuba ndiyithengisile kwaye yahlala kwiscreen sasekhaya kunye neapile kwaye ayizange iqale kwakhona okanye yenze nantoni na ukuba ihlale apho…. ? Yintoni endifanele ndiyenze ukusetha kwakhona?
Ewe, ndinengxaki ngalo lonke ixesha ndithenga iringithoni, uyibeka njengethoni, nokuba ikhona yonke into eyintloko, kuphela emva kwemizuzu embalwa ithoni isusiwe kwaye xa enditsalela umnxeba ithoni engagqibekanga iyaphuma kodwa ithoni ihlawulisiwe kwaye andiyifumani xa kuthengwa okanye kukhutshelwa,
UCarmen, undincede kakhulu, enkosi.
Phendula kwi raquel
Ingxaki yam kukuba ngelixa emsebenzini iqhagamshela kwi-wifi yeofisi, kodwa xa iiyure zam zokusebenza zigqithile ayinakuxhuma kwi-intanethi yesicwangciso se-iphone, andazi ukuba ndingayisombulula njani
Molo, ukhona umntu onokundinceda? Ndiyilungisa njani ingxaki eyandisiweyo yescreen kwaye ayizukundivumela ukuba ndivule okanye ndicime i-iPhone 6 kuba ayizukundivumela ndibone ikhibhodi Enkosi ngobusuku obuhle. Ngendlela, sele ndizamile ukukhupha ibhetri kwaye ndiyiphinde ndiyenze isebenze kwakhona isikrini esandisiweyo.
Carmen Rodriguez (@carmenrferro) sitsho
Molo uElias, zama ukwenza i-DFU ukunyanzela ukuqala kwakhona kwazo zonke iinkqubo, ndiyathemba ukuba oku kuyanceda, isombulule iingxaki ezininzi kum.
Phendula kuCarmen Rodriguez (@carmenrferro)
Isikhokelo se-Angeles sitsho
Molo u-ELias, ukwazile ukusombulula ingxaki? Into efanayo iyenzeka kum nge-iphone 6s entsha. = /
Phendula u-Angeles Guidobono
I-iphone 6 yam ayidibanisi ne-mac yam ngebluetooth, ndifumana kuphela ikhowudi yentengiso kwaye ziyafana, ndiyinika ikhonkco, kodwa andazi ukuba ndenzeni, umntu angandinceda kule ngxaki, enkosi , ndiyabulisa
Kutheni ukuba ndineefoto ezingama-895 xa ndibona i-albhamu "Zonke iifoto" ndifumana i-1.975 xa ndibonisana neefoto kwiiSetingi zoLwazi?
abathethi nto intsha
oku akuncedi nganto
Mva nje andinathamsanqa ngeapile. I-iPad Air iyekile ukusebenza, bendiyibeke endaweni ye-STORE eWashington DC kwaye bendingenazo iingxaki, kodwa ii-iPhone 5s endizitshintshe kwangolo suku emva kweenyanga ezintathu ziyekile ukusebenza, kanye xa iphela iwaranti yokutshintsha. IMacBook Pro ngequbuliso yaba likhadi lam, ngokuchaseneyo noMoya oba ngcono nangcono. Ngoku lonke usapho lune-iPhone 6Plus kwaye hayi kwiintsuku ezimbini ezidluleyo andinyanzelekanga ukuba ndiqale ngokutsha. Ayizizo izinto ezingabizi kakhulu ukuze kwenzeke oku. Ndiyithandile iMacBook esele izakuphuma, kodwa eyona ibizayo sele iphelelwe kwaye ayinayo ne-tunderbolt 2 iadaptha (eyi-1 nokuba).
Kuya kuba kuhle ukuba indawo iphendula ezi zinto kuba abo babhalayo bangabasebenzisi, hayi amagcisa.
Ukundinceda ndifuna ukucima usetyenziso lwefektri
Iselfowuni iphone6 ​​emva koko indixelele ukuba kufuneka ndihlaziye ️Ndiyibekile kwiscreen 1 app yewotshi njengoko ndiyicima axuliooooo !! Uncedo olungxamisekileyo !!
Basusa imemori kwiselfowuni yam ️
Ewe, ukuba bayikrunekile indlela ebindiluncedo ngayo ukudibanisa iimephu kwimoto engenazandla kwaye xa bebeka le nguqulo intsha bayayisusa, kulungile ukuba bayayifaka kwakhona
Lulu perez sitsho
Molo, ndiyaxolisa, ndinengxaki enkulu, xa iselfowuni yam ivaliwe iyacima kwaye ayisasebenzi, umntu unokundinceda ngento endinokuyenza, ngaphandle koko kubonakala ukuba ukhetho lweWi-Fi luthintelwe kwaye Andikwazi nokungena ukuyicima kwaye ndibuyele ukuyibeka .. nceda nceda!
Phendula lulu perez
Ubusuku obuhle, ungayisombulula le ngxaki? Ndinayo enye kodwa kuye kwafuneka ndiyivule ngombane ocinezelweyo nasekhaya ngaxeshanye
Ndine-iPhone endiyithengileyo ngoFebruwari 2015 kwivenkile yeApple ePanama. Namhlanje uMeyi 07, ngentlawulo ephantse yagcwaliswa, ngequbuliso yahlala ifile kwaye ayakhanyisela.
Ndine-IPhone 6 Plus endiyithengileyo ngoFebruwari 2015 kwivenkile yeApple ePanama. Namhlanje, nge-07 kaMeyi, ngentlawulo ephantse yagcwaliswa, ngequbuliso yahlala ifile kwaye ayakhanyisa.Ndifanele ndenze ntoni?
UMarcela chediack sitsho
Molweni nonke!! I-3 ye-iphone 6s ehleli iswelekile, kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezimbini !!!
Xa ndiphuma ndibaleka, kunye neselfowuni kwibhanti yam yengalo, ibluetooth kwi ... xa ndifika ekhaya ilungile. Ngesiquphe iyaphuma, kwaye ayisebenzi kwakhona. Sele nditshintshe i-1 ngeenyanga ezimbini zokusebenzisa, okwesibini ngeveki kunye neyesithathu ngeentsuku ezi-6 zokusebenzisa ... !!! Ngapha koko, eArgentina akukho sitolo sisemthethweni seApple, kufuneka ndilinde umntu oza kuhamba kwaye andenzele inceba yokutshintsha. Akusekho iphone kum. owesi-3 ngumtsalane. Utshintsho lweBrand.
Phendula uMarcela Chediack
Molo, ndine-iPhone 6 kwaye ndichukumisa isikrini kubonakala ngathi yonke into iye yaba nkulu kakhulu kwaye ayiphenduli okanye uyiqale phantsi .... Ngaba kuya kubakho isisombululo?
Ewe ndinayo i-iPhone 6 kukho amaxesha okucima kuphela ukuba isenebhetri epheleleyo ndifuna ukwazi ukuba kutheni icima iyodwa kwaye kukho amaxesha angasafuni kuyilayita
UPatty G. sitsho
Enkosi ndifuna ukwazi ngayo yonke le nto! Sukumamela ukugxeka ofuna ukukucaphukisa, uCarmen ndinengxaki kwi-iPhone6 ​​yam nge-I Umyalezo isikrini sihafu kwaye sime nkqo kwaye andinako ukusisusa, ungandinceda okanye umntu owaziyo malunga I-iPhone 6 kunye nezimvo apha. Enkosi
Phendula ku Patty G.
Xa isikrini sikhulisiwe kungenxa yokuba usebenze ngokusondeza, kuye kwenzeka kum amaxesha ambalwa. Ndiyidibanisa nekhompyuter kwi-iTunes okanye ndicime iZoon ngaloo ndlela
I-JAVIER DUQUE sitsho
UNGANDINCEDA UMNTU …… .. XA NDISETYENZISA IPHONE 6 SETETSING NDIQALISA INKQUBO YOKUBUYISELWA KWAKHONA KE NDIXHOMEKE KUPHELA NOMFANEKISO WAMAC BAR KWI-10% YOKUSETYENZISWA KOKUQALA KUQUKETHWE IINTSUKU EZI-2, KUNYE OKUFANELEKILEYO IBATTERY YABHANGISWA NGOKUPHELELEYO NAKUYO UKUYITSHAYA KWAKHONA, YAYIHLALA KWISIKRAYENSI ESINYE (NGOMFANEKISO WAMAC NENKQUBO KWI-10% YOKUSETYENZISWA)
Phendula JAVIER DUQUE
JAIRO CASADIEGOS LEAL sitsho
Javier, mva kwemini, kwenzeka into efanayo kum nge-iphone 6 yam, yeyiphi impendulo oyifumeneyo. Enkosi.
Phendula JAIRO CASADIEGOS LEAL
Kwenzeka into efanayo kum kwaye andinakukwazi ukuyisombulula)) =
KWENZEKE KANYE KUM KANYE NA, NGABA UKHONA UKWENZA UKUSOLULA OKO? ENKOSI
UManuel Miguel sitsho
aifon 6 itangada encinci
Phendula uManuel Miguel
Ndine-aifon 5 kwaye yayigqibelele kum, ndathenga i-aifon 6 kwaye ingaphantsi kwenyanga sele indinika iingxaki zokugubungela xa ndingena garrefur abantu batsalela umnxeba nge-100 euro
kwaye ndine 700 euro andikwazi ukubiza iselfnut iselfowuni ucingo kwaye siyayithanda i-gelipollas yokuchitha imali, ubiza i-appel hayi ityala lokuzibamba ukuze uzilobele kwaye awukwazi ukubiza kwi-garrefur, uthenge enye iselfowuni leyo hayi aifon
UConstance Lillo sitsho
Molo! .. i-myiphone ivula isikrini rhoqo kwimizuzwana emi-5 .. kwaye loo nto yenza ukuba ibhetri ihlale phantse yonke into emini, kuya kufuneka ndiphathe itshaja kuyo yonke indawo ukuze ndingahlali xa ibiza: (ngubani owaziyo ukuba kukho isisombululo ?
Phendula u-Constanza Lillo
molweni ... ndibeke reset ndacima iphone ndashiyeka ne icon ye apple
ndicela uphendule endincedayo
UMariana demczuk sitsho
Phendula uMariana demczuk
UPedro Pablo sitsho
Carmen othandekayo: Ndiyazibulela izimvo zakho kunye neengcebiso ngokubhekisele kwi-iPhone 6, nangona ndingakhange ndibonise naziphi na iingxaki ezichazwe apha ngasentla, ndiyithatha njengegalelo elikhulu elisivumela ukuba sabelane ngolwazi olufunekayo ekusebenzeni ngokuchanekileyo kwezixhobo. Ngokoluvo lwam, ngokusekwe kumava am obuqu, ndonele ukwaneliseka kukusebenza kwesixhobo endisithatha njengesixhobo somsebenzi esigqwesileyo nesisebenzisana ngokumangalisayo nazo zonke izinto zeteknoloji ezisirhangqileyo. I-iPhone 6 ngaphandle kokuphononongwa kwayo okungalunganga yeyona smartphone ibalaseleyo isungulwe yi-Apple kwintengiso, isebenza kakuhle kwaye inobungakanani obugqibeleleyo kuthathelwa ingqalelo izixhobo ezikwizixhobo ezine-Android ezingasasebenzi kwaphela. Kwakhona ndiyabulela ngegalelo lakho kwiforum kunye nabantu abangakhanga kakhulu, umzekelo uDamien. Kuya kufuneka bahlalutye imvelaphi yesicatshulwa endaweni yefom. Nangona uCarmen wayeneempazamo ekubhaleni, intsingiselo yebinzana ayilahleki. Ngaba uDamien ucinga ukuba le yeyona nto ibaluleke kakhulu?
Phendula kuPedro Pablo
Carmen othandekayo, okanye amalungu ebhunga; Ndithenge i-iPhone 6 kwiveki ephelileyo, kwaye ndiye ndabona into endikhathazayo kakhulu kuba ezinye iifowuni zefowuni bendingenangxaki; Ndiqhagamshela kwinethiwekhi ye-Wi-Fi, ndiyayisebenzisa kodwa xa ndiyeka ukuyisebenzisa, icima ngokuzenzekelayo inethiwekhi, indishiya ndixhumeke kwinethiwekhi yomboneleli wam womnxeba, kwaye ukuphinda ndixhume kwakhona kufuneka ndiye kuseto lwenethiwekhi kwaye ndicofe inethiwekhi yeWi-Fi endiyigcinileyo; inyani kukuba iyacaphukisa into yokwenza le nkqubo ngalo lonke ixesha ndizama ukusebenzisa nasiphi na isicelo esidinga ukuqhagamshelwa.
Kudala ndijonga ukhetho lwe-WiFi ukubona ukuba ndibona nantoni na engaqhelekanga, kodwa andifumani nto konke konke. Umntu onobubele uya kuphawula kumava malunga noku. Enkosi.
Molo Damian. Ngaba ukhe wazama ukusebenzisa ukubethela kwe-WPA? Ndiza kukuxelela: Ndiyazi iimeko ezininzi apho kwenzeka into efanayo kuthi kwaye sele yenzekile nangezixhobo ze-Android. Kwiimeko endizaziyo, nge-WPA encryption, esinokuthi yomelele ngakumbi, bekungekho ngxaki zolu hlobo. Ndikuxelela le nto kuba andazi ukuba kwenzeka ntoni kwi-iPhone yakho 6. Oko ndaqala ukubethela kwi-WPA khange ndibenangxaki.
molo, ndine-iphone 6 kwiintsuku eziyi-3 ezidlulileyo. Ubusuku bokuqala ndibubeka ukuba ndihlawulise ndivuka ngengomso kwaye ifowuni ifile. Ayisebenzi. ayinakubekwa ngokutsha. Kwaye itshaja yebhetri okanye intambo ye-usb yekhompyuter ayindiboni.
Inokuba yintoni ingxaki? ipini yokutshaja, ibhetri okanye iseli lafa?
Molo, ndinayo i-iPhone 6 kwaye okoko kwagqityelwa ukuhlaziywa ndinengxaki. Ndenza idatha yeselfowuni isebenze (kule meko iYouTube) ndiphuma kuseto kwaye ndingena kwakhona kwaye usetyenziso alusebenziswanga ngenethiwekhi. endinokusebenzisa ngayo i-youtube nge-wifi kuphela.
Kwenzeka into efanayo kum, kuphela nge-Facebook andikwazi ukwenza idatha yeselfowuni kweso sicelo
Ndine-4s ye-iPhone kwaye ndifumene isicelo esithumela umculo weBluetooth kwimoto yam, ndicinga ukuba licebo elilungileyo kwaye ndilifumana liluncedo ingakumbi kwiincwadi zomsindo, ekuphela kwento endinqwenela ukuyazi ukuba ikhona enye Inketho ibizwa ngokuba yiBlue2car kwaye andifumani lwazi malunga nayo, ungandinceda?
jairo ivan sitsho
Ndingayiqala njani kwakhona i-iPhone yam ... . . . . . ndinike iingcebiso, ukhetho .xfa
Phendula u-jairo ivan
Molweni, ndine-iphone 6 kwaye ibambekile, andinakwenza nto, nayo ayizundivumela ndiyipake, ndenzeni?
Phendula ku cleovea@gmail.com
Molo! Ndine phne 6 kwaye ndinengxaki yokufumana iinethiwekhi ze-wifi. Kunqabile ukuba ndifumane iinethiwekhi kwaye ezi ndizifumanayo zincinci kakhulu. Yintoni enokwenzeka? Sele ndiyivulile yonke into njengoko kuchaziwe apha ngasentla kodwa ingxaki enye iyaqhubeka, ndingasibanga isiqinisekiso? Ndiphakathi ku; okanye ukuyithenga
Ungaze uyenze ukuqala kwakhona iselfowuni. Kuba kamva ayisebenzi kwaye kuya kufuneka uyithathe ukuyilungisa. Ilayisha kancinci ukuqala kwakhona okanye ukubuyisela emva koko ayilayishi kwakhona nangokunjalo. UNGAZE UPHINDE UBUYISELE NJENGOKO ITHETHA KWELI SAYITHI
Uia ndiyibuyisele nje kuba ndingazi kwaye ngoku kwenzeka kum, iyajongwa, umba kukuba ndivela eArgentina kwaye apha akukho App Store, nceda umntu owaziyo ukusombulula le ngxaki.
ii-olga cubillos sitsho
Molo, ndinayo i-iPhone 6, ibisebenza kakuhle kwaye ngesiquphe yanamathela, ayindivumeli ukuba ndityibilize nantoni na kwiscreen okanye ndiyicime ... ndenzeni ukuze ndivule, ndiyabona ukuba yinto eqhelekileyo ingxaki kwezi fowuni, kodwa andisifundi isisombululo,
Phendula i-olga cubillos
Molo ! Ndinefowuni-6 kwaye ndifile, kungenzeka ntoni? Ukuba umntu unokundinceda, ndiyayixabisa.
Namhlanje kusasa ndithenge i-megabyte ezingama-50 zesithuba e-Icloud, bandifakele imali kwiakhawunti yam (ngendlela, phinda kabini oko kupapashiweyo: € 1,98 xa oko bebenikise ngako bekuyi- € 0.99) kodwa andinawo amandla e-mega angama-50 kodwa ezi 5 bazinika simahla. Ngaba unayo nayiphi na ixesha lokulibaziseka ukusukela xa uyihlawula ide inikwe wena?
Molweni, ndinengxaki ne-iPhone 6, iyacotha kwaye inkumbulo yam iphantse ibe yi-vasia, umntu angandinceda
Ngamaxesha athile, ikhamera ye-iphone 6 yengozi yeselfowuni, isikrini simnyama kwaye akukho nto isebenza, siyazilungisa emva kweentsuku ezininzi. Nceda ukuba kukho umntu owaziyo ukuba enze ntoni ukuze kwenzeke oku, ndixelele. Enkosi. Hector ukuhambelana namanye amagama
Ndiyalungisa, ukuze ingenzeki
Ingaba ihamba kanjani
Molo, ndine-iphone 6 Plus kwaye kuvela ilivo elithi… le ntambo okanye isincedisi asiqinisekiswanga, ngenxa yoko isenokungasebenzi ngokuchanekileyo ngale iphone ……. kodwa kuyacaca ukuba andinanto iqhagamsheleyo…. Ndinengxaki yokungakwazi ukumamela umculo, imiyalezo yeWapps yelizwi okanye naluphi na uhlobo lwezandi, kuphela umnxeba, endibona ngawo ukuba isithethi siyasebenza…. kodwa andazi ukuba ndenze kanjani okunye ... yayigqibelele
Molo, ndinengxaki nge-IPhone yam, emva kokuba ndibize imizuzu iscreen sihambile, hayi ifowuni, kuba ucofe iqhosha elisezantsi lemizuzwana embalwa usebenze ngokusebenza kwelizwi.
Zinkosi, nicinga ukuba ndingayisombulula njani le nto?
Ndine-iPhone 6s kwaye ndinengxaki yokuthumela ii-imeyile .. Ayizukundivumela .. Ndiyakwazi ukufumana kodwa ndingathumeli. Ndifumana ukhetho oluthi i-imeyile okanye ipaswedi ayilunganga, kwaye ayisiyiyo. Ndingayisombulula njani? Ndizamile ukucima i-imeyile yam kwaye ndayifaka kwakhona kwaye akukho sisombululo
Rossy romero sitsho
UCarmen: Ndiyathemba ukuba ungandinceda.Ndimtsha kule iPhone ndino-6 dibanisa kodwa ayinasicelo se-3D kwaye nekhamera ayinayo ifoto ephilayo okanye i-flash yangaphambili.Andifumani naluphi na olo khetho. mna kutheni?
Phendula uRossy Romero
Molweni ndinike umva ndaya kwi-iPhone 6 yam kwaye iscreen sihambile kodwa ifowuni isavuliwe, ifumana iifowuni kwaye ndiyakwazi ukuphendula kodwa xa ndiyidibanisa ne-pc indicela ikhowudi yenombolo nangaphezulu okanye ngaphantsi chukumisa isikrini apho amanani akhoyo kodwa akukho Vuliwe, ndingenza ntoni?
Molo, i-iPhone 6 yam sele ilityeli lesibini ingenamfanekiso, oku kuthetha ukuba ukuba iifowuni zingena kodwa andinakuphendula kuba isikrini asivulanga, andikwazi ukuyicima, njl. ukuba umntu angandinceda ndingayixabisa kakhulu
Molo, molo, ndinayo i-iPhone 6 kunye kwaye okoko ndiyihlaziyileyo, ikhethiwe, iyanamathela kwiscreen seaprtuna kwaye kufuneka ndiyilinde ukuba iqalise, ngaba sikhona isisombululo
UMarcelo, kwenzeka into efanayo kum! I-4G icotha kakhulu nayo? Ukusukela uhlaziyo olu-2 lokugqibela lubuyela umva, lixesha lokuqala ndinengxaki kwiminyaka nge-iOS. Uzophakama, Imisebenzi, ngolunye lwezi ntsuku uzakutshisa tooooddooo !!!
Xa ndithetha efowunini ndinentloko ebluetooth ndiyakuva kodwa abandivanga, ndingenza ntoni?
Ndinengxaki ne-iphone 5 yam, ndidlala umculo we-youte kwaye ndiwumamela kakuhle, kodwa ukuba ndibeka ii-headphone, kuphuma umculo kuphela kodwa ilizwi liphuma kuphela yingxolo, ilizwi elindithumelayo ayivakali ngee-headphone…. Kuphela xa ndisebenzisa into yokuva, ayisebenzi… kufuneka ndenze ntoni ??? ungandinceda?
UManuel Alejandro Chacin Rodirguez sitsho
Kuya kufuneka uthenge ezinye ii-headphone, zonakala.
Phendula uManuel Alejandro Chacin Rodirguez
URoberto Becerril sitsho
Ndinengxaki ngokuqaqamba kuhlala kumnyama kwaye kuthatha ixesha elide ukubuyisa ukukhanya yi-iPhone 6s
Phendula URoberto Becerril
UYESU WAQHUTYULA sitsho
Ubusuku obuhle obuvela emantla mpuma eMexico kwiforum ethandekayo,
Ndinengxaki ye-wifi nge-iPhone 6 yam emva kokuhlaziya ubusuku obudlulileyo, ndimka nje kancinci kwi-router kwaye amandla e-wifi alahlekile, izinzile ngokulinganayo xa ndikwi-1 yemitha ukusuka kumzila. Ndiqhubeka nokuphanda kwaye akukho nto. akukho sisombululo sicacileyo okwangoku ngaphandle kokuba ulinde uhlaziyo olutsha okanye nokuba ungabelana ngezimvo ezithile nam. Ndine iphone 6 ene-iOS 10.0.2 (yamva).
Sele ndizamile zonke iziseko, ukubuyiselwa kuseto, nge-itunes, nge-icloud kwaye akukho nto !!! ….
naziphi na izimvo ???????? '
Phendula kuYESU SIQHELE
UJuliana Garmendia sitsho
Molweni nonke! Ndine-iPhone 6 kwaye iscreen esikhulu asisebenzi, oko kukuthi, ndifumana imiyalezo, izaziso kunye neefowuni, kodwa ayindivumeli ndiphendule kuba akukho nto ivelayo, kuphela umfanekiso wam ongezelelweyo, andikwazi ukuwucima okanye ukuwuvula , indivumela nje ukuba ndikhuphele i-tab kwaye ndibone izaziso, xa ukhetha enye ithumela ukuba ndivule ifowuni kwaye ayisavumeli ukuba ndivule ngeminwe okanye ndibeke ikhibhodi kum, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kwenzeke ntoni? okanye ndingenza ntoni? Ngokucacileyo andikwazi ukuyicima! Enkosi!!
Phendula uJuliana Garmendia
Molo Marcos, ndinengxaki efanayo ukuba uphawule. Ukwazile ukuyilungisa ndinayo iMac ukusuka ngasekupheleni kuka-2015.
Molo, molweni ekuseni, kufuneka ndazi ukuba kutheni i-iPhone 6 Plus ingandivumeli ukuba ndifake izicelo zam nokuba ndichukumise kangakanani isikrini, kwisicelo sayo asindivumeli ukuba ndicime ndize ndichukumise kwakhona ukuze ndicime ngalo lonke ixesha ndichukumisa isikrini ukuze ndibeke ipassword yam.shiya kwaye kufuneka ndiyenze ngonyawo lwam, umntu angandinceda enkosi
Mholo. Ndimtsha kule forum. Ndinengxaki: I-ID yam Yomnxeba engenayo ikhubaziwe. Zonke iifowuni zingena ngokungaziwa. Xa ufaka i-ID yoqwalaselo / yomnxeba, iqhosha "lifihliwe" kwaye alindivumeli ukuba ndilisebenze okanye ndilicime Ndingayisombulula njani loo nto? Ndiyaluxabisa uncedo. UAlicia
Ndine-ipone 6 kunye ne-126 gb
Ingxaki endinayo yeyokuba isikrini sihlala sitshixiwe, ungaya kwiscreen esinye uye kwenye okanye andikwazi ukuvula nayiphi na inkqubo.
emva kwexeshana iyasebenza kwaye emva kwethutyana iyaphinda ibambeke
Ngaba umntu unokundixelela ukuba yeyiphi ingxaki onayo
luisao acosta sitsho
Molo, ingaba umntu angandinceda ngeselula yam, nditshintshe iscreen kwaye ayipasanga iapile kwaye xa ndiphantsi kwesoftware yenza impazamo, ndenza ntoni?
Phendula luisao acosta
I-iPhone 6 Plus yam iphuma kulawulo ngokwayo
Vula nasiphi na isicelo okanye wenze umnxeba ngaphandle kokuba ndikwazi ukuwulawula
Kufuneka ndiyicime mzuzu ngamnye ukunqanda iminxeba, inyani sele idikiwe mna hee
Kodwa indibangela kuphela le ngxaki xa ndiyiphatha epokothweni yebhulukhwe, hayi njalo xa ndiyinxiba ebhatyi, kodwa ukuba liqela elilungileyo kulungile.
Kuya kufuneka ndiyithumele ukulungiswa kwivenkile e-Lima yile nto i-Apple indixelele yona
Molo, kwenzeka ntoni kum nge-iphone 6 yam kukuba kufuneka ndincamathele kwimodem, ndibenomqondiso weWi-Fi, ukuba ndiyemka kwimodem uphawu olulahlekile, ndizamile ukuyiseta kwakhona kwaye funda ukuba le modeli iza neengxaki ze-eriyali, ndingenza ntoni?
Usaphila lomntu ubhale la post? Kuya kufuneka uzibulale okanye utshintshe imisebenzi.
Emva kohlaziyo lwe-iPhone 6 yam kunye ne-wifi kunye ne-bluetooth ibingasebenzi. Umntu undincede nceda.
Inyani yile yokuba uhlaziyo lwamva nje lwe-IOS luyenyanyeka, ndicinga nzulu ngokutshintshela kwi-Android.
Ndinolibaziseko ekubhaleni kwaye ibhetri ngequbuliso iyehla kwaye ukuba ndiyayisebenzisa ikhamera ngokungathi ngomlingo iyacima kwaye ayibuyi ngaphandle kokuba ndiyifakile kwaye ndiyaqonda ukuba isenayo ibhetri.
Oku kwenzeke nge-IOS 11 enkulu, Enkosi kwinyani yokuba uhlaziyo lwe-IOS lundishiye ndicaphuke kakhulu, indlela eyayintle ngayo i-iPhone kwimizuzu nje embalwa olo hlaziyo
UKarla de Garcia sitsho
Ikhamera kwi-iPhone 6 Plus ayisebenzi. Andikwazi ukuthatha imifanekiso.
Phendula uKarla de Garcia
Felipe hassan sitsho
ndilungile kubo bonke abalandeli be-apile enkulu yesono, inyani kukuba ulwazi ondinike lona beluluncedo kakhulu, i-iphone 6 yam besele ingqina ukuba ukungazinzi kunxibelelwano olungenazingcingo… .Enkosi !!!
Phendula u-felipe hassan
Sineenguqu ezingaphezu kwe-100 phakathi kwe-beta 2 kunye ne-beta 3 ye-iOS 11
UTim Cook noEddy Cue baya kwinkomfa yonyaka yeSun Valley